AbakwaSony bajoyina intsingiselo yee-smartphones ngaphandle kwesakhelo esikrinini | Iindaba zeGajethi
Kwi-MWC edlulileyo, uSony wazisa i-terminal enezinto ezintle kakhulu ngaphakathi, kodwa ngaphandle yayiseyifowuni eqhelekileyo enjenge-iPhone, enemiphetho yesikrini egxininisiweyo. Njengoko sonke sisazi, ubuncinci ukuba ulandela itekhnoloji, abavelisi babheja ekumiseni iiterminal ngeefreyimu ezincitshisiwe zaya kuthi ga Xiaomi Mi Mix, i-Samsung Galaxy S8 kunye ne-S7 eyandulelayo... I-Apple ibonakala ngathi ijoyine umkhwa ngokusungulwa kwe-iPhone 8, njengoSony, njengoko sikwazile ukufunda kwiFowuniArena.
Njengoko besenditshilo, ukukhangela kweflegi kaSony okwangoku yiPrimiyamu yeXZ, isixhobo esinemiphetho esingatsaliyo ingqalelo yesiphelo, kodwa kubonakala ngathi isizukulwana esilandelayo sale modeli siza kusinika isikrini esikhulu sisebenzisa ithuba elikhulu. yinxalenye yesakhelo, ukuze ubungakanani besixhobo abunyanzelekanga ukuba bunyuswe.
Le fowuni intsha inokubona ukukhanya kwi-IFA 2017, ubugcisa betekhnoloji obubanjwa minyaka le eBerlin ngoSeptemba. USony ufikelele kwisivumelwano neJapan Display eyayiza kuba ngumphathi wokuvelisa ezi zikrini ezinokuba nomlinganiselo we-18: 9, njenge-LG G6 kwaye ifana kakhulu neGPS S8.
Okwangoku inkampani yaseJapan khange iqinisekise ngokusesikweni ukuba izakubonisa itheminali entsha kulo mboniso, kodwa kuthathelwa ingqalelo ukuba iPrimiyamu yeXZ yaphehlelelwa ngaphantsi nje kwinyanga ephelileyo, kusenokwenzeka ukuba iyakubhengezwa kodwa ukufumaneka kwayo ngokusemthethweni akuyi kuba kweenyanga ezimbalwa, mhlawumbi ngeKrisimesi, ixesha apho iinkampani zetekhnoloji bafumana inxenye ebalulekileyo yeenzuzo zabo.
Yandisa ubungakanani bescreen inyanzela abavelisi ukuba batshintshe imeko yesenzwa somnweNjengoko sibonile kwi-Samsung nakwi-Apple. Ukubakho kokuyidibanisa phantsi kwescreen kuseluhlaza kakhulu ngenxa yeengxaki zokusebenza, ukhuseleko kunye nokucotha okwangoku, ngokutsho kwamahemuhemu ahlukeneyo apapashiweyo malunga ne-Samsung Qaphela 8 kunye ne-iPhone 8.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » USony ujoyina imeko ye-smartphone ngaphandle kwesakhelo esikrinini